Mkpọmịlị na-atụ aro Weebụ Weebụ Kasị Mma Ka Ị Tụlee
Selenium bụ otu ihe nyocha ntinye aka na-emeghe nke ngwa ngwa maka ngwa weebụ ndị a na-eji arụ ọrụ. nyocha na ihe nchọgharị. Selenium na-enye akụrụngwa maka nkọwa W3C WebDriver, mmemme mmemme nke dakọtara na ihe nchọgharị weebụ. Akụrụngwa a gụnyere akwụkwọ dị iche iche na ngwaọrụ ndị na-eme ka ihe nchọgharị weebụ rụọ ọrụ.
Gịnị kpatara software Selenium?
Software Selenium na-elekwasị anya ngwa ngwa ejiri na weebụ wepụ data site na ibe weebụ. Akụrụngwa a gụnyere nke a na-arụ ọrụ nke ngwanrọ iji zute nchịkọta weebụ nkọwa. Selenium software nwere ihe anọ dị mkpa iji tụlee.
E mere Selenium WebDriver iji nye otu interface mmemme dị mfe.Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'iwepu ibe weebụ dị ike, Selenium-WebDriver bụ akụkụ ahụ iji tụlee. Ngwaọrụ a na-akwado nbudata weebụ na ibe weebụ ebe ọdịnaya nwere ike ịgbanwe n'enweghị iweghachite ibe.
WebDriver na-enye Ngwaọrụ mmemme ngwa ngwa (API) nke na-enye nkwado dị ukwuu maka ule weebụ na nchapu. Ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ site n'ịkpọ oku gaa na ihe nchọgharị site na iji nkwado zuru ezu maka akpaaka.
A na-eji Grid Selenium mee ihe n'ozuzu iji kesaa ihe odide n'elu ihe karịrị otu igwe igwe.N'okwu ndị dị mfe, Selenium Grid na-enyere gị aka ịnwale ule gị na ngwaọrụ dị iche iche arụnyere na ihe nchọgharị karịrị otu. Grid ahụ na-enye gị ohere ịme ihe na-ekesa na gburugburu ebe a na-egbu egbu.
Oge bụ ihe dị mkpa ma a bịa na ntanetị weebụ. Ọ dịtụbeghị mfe iwepu ibe weebụ dị ike. Mepee ihu akwukwo a site na ime ngwa ngwa oru gi. Ị nwere ike ime nke a site na ịme ọtụtụ ule n'otu oge ahụ. Ihe kacha mma maka iji Selenium bụ eziokwu na ị nwere ike ịrụ ọrụ nke otu nchọgharị, mbipute, na ụdị.
Control Selenium Remote Control (RC)
Selenium IDE bụ edemede nke na-arụ ọrụ dịka mgbakwunye Firefox nke na-enye gị ohere igbanwe, dekọ, na debug data. Maka ndi nmalite, Selenium IDE edeputara ma na - emekorita mmekorita onye ozo na ihe nchọgharị Firefox.
Software Selenium jikọtara na Python 2 na Eke Ọgba 3. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ịgbakọkọta Internet Explorer ọkwọ ụgbọala, ị ga-achọ 32 na 64-bit cross-compilers na Visual Studio 2008. Ịmara na Ruby 2 bụ uru bara uru.
Wepu ibe weebụ na Selenium
Ihuenyo gị nwere ike igosi data weghaara mgbe ụdị niile ahụ juputara. Ụfọdụ ibe weebụ na-ewe oge tupu ebu ọdịnaya. Iji kpochapụ ụdị nke ibe a, mechie site na nhọrọ niile ị dabere, nke dị n'okpuru ụdị weebụ. Ọ dị mkpa iburu n'obi na usoro Selenium dakọtara na Windows Ope System, Mac os, na Linux. Ibe weebụ gị na-ekpuchi na usoro Selenium Source .